कुलमान घिसिङको अर्को सफलता
आवाज नेपाल, May 15, 2019
दार्चुला – दार्चुलाको सदरमुकाम खलंगामा पहिलोपटक नेपालको आफ्नै बिजुली पुगेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बलाँच–खलंगा ३३ केभी प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न गरी यो लाइन बुधबारबाट सञ्चालनमा ल्याएको हो । यससँगै अब खलंगा नेपालकै विद्युत् प्रणालीमा समेटिएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले दार्चुलाको जिल्ला सदरमुकाममा राष्ट्रिय ग्रिड पुर्‍याइ आफ्नो उत्पादनबाटै विद्युत आपूर्ति सुरु […]
आवाज नेपाल, May 7, 2019
काठमाडौं – चिनियाँ कम्पनी चाइना कोन्स भेन्चर होल्डिङ्स लिमिटेडले फोहोरबाट बिजुली निकाल्ने परियोजनाका लागि ८ अर्बको लगानी प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । दैनिक ५ सय टन फोहोर व्यवस्थापन गर्दै १० मेगावाट बिजुली निकाल्न चिनियाँ कम्पनीले लगानी बोर्डमा ८ अर्बको लगानी प्रस्ताव दर्ता गराएको हो । कम्पनीद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार २ वर्षमा परियोजनाको काम सम्पन्न गर्ने गरी […]
कुलमानकै कारण प्राधिकरणले गर्यो झण्डै तीन अर्ब कमाई
आवाज नेपाल, April 12, 2019
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गएको आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ८४ करोडभन्दा बढी रुपैयाँ नाफा गरेको छ । प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङ कार्यकारी निर्देशक भएर आएपछि मुलुकमा लोडसेडिङ अन्त्यका साथै संस्थाको आर्थिक जीवनमा पनि सुधार देखिएको हो । महालेखापरीक्षक कार्यालयको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार कार्यकारी घिसिङको नेतृत्वमा प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५मा २ अर्ब ८४ करोड ८१ लाख रुपैयाँ खुद […]
आवाज नेपाल, April 8, 2019
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विगतमा लोडसेडिङ गराउनेहरु फेरि सल्बलाएको दाबी गरेका छन् । प्राधिकरणमा रहेर राम्रो काम गरिरहँदा पनि अनेक आक्षेप लगाएर छवि धमिल्याउने प्रयत्न भएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए । गैरकानूनी रुपमा ६० लाख भन्दा बढी भत्ता बुझेको भन्दै केही सञ्चारमाध्यमा समाचार आएको थियो । सोमबार रत्नपार्कस्थित प्राधिकरणको कार्यालयमा […]
आजबाट सुरुहुँदै : ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी : हरेक नेपाली जलविद्युतको शेयर धनी’
आवाज नेपाल, February 14, 2019
काठमाण्डाै – सरकारले ‘जनताको जलविद्युत आयोजना’ कार्यक्रम घोषणा गर्ने भएको छ । उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले बिहीबार काठमाण्डाैमा एक कार्यक्रमका बीच आयाेजनाकाे घोषणा गर्न लागिएको जानकारी दिनुभएको हो । बुधबार काठमाण्डाैमा पत्रकार सम्मेलन गरी उहाँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीबार राष्ट्रियसभा गृहमा घोषणा गर्नुृहुने त्याे कार्यक्रममा जनताको छरिएर रहेको पूँजी परिचालन गर्ने […]
विमानस्थलमा वाल पेपर च्यातिन्छ, ट्वाइलेट पेपर चोरी हुन्छ’
आवाज नेपाल, January 17, 2019
त्रिभुवन विमानस्थल कार्यालयले नियमित बजेट खर्चिएर अस्तव्यस्त बनेको एयरपोर्टलाई व्यवस्थित गर्न प्रयास गरिरहेको छ । तर, सुधारका लागि राखिएका तथा सजाइएका वस्तुहरु बिगार्ने, च्यात्ने र जथाभावी फोहोर गरिदिने लगायतका समस्याले विमानस्थल प्रशासन हैरान भएको छ । विमानस्थललाई सुधार गर्न सरकारले प्रयास थालेको लामो समय भएको छैन । सुधारका लागि ‘बुटिक एयरपोर्ट’ को अवधारणा ल्याइए पनि […]
खिम्ती–बाह्रबिसे प्रसारण लाइनको ठेक्का रद्द
आवाज नेपाल, December 31, 2018
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तोकिएको शर्त र समयअनुसार काम नगरेको भन्दै तामाकोशी–काठमाडौं ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गतको पहिलो खण्डको ठेक्का रद्द गरेको छ । सो प्रसारण लाइनको काम चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी ग्वाङ्सी ट्रान्समिसन एण्ड सवस्टेसन कन्ट्रक्सन तथा सेञ्जेन क्लाउ इलेक्ट्रोनिक्सको संयुक्त रुपमा गर्दै आएका थिए । ठेक्का सम्झौताअनुसारको काम नगरेपछि प्राधिकरणले चिनियाँ कम्पनीको ठैक्का रद्द […]
माथिल्लो तामाकोशीको सेयर बाँडफाँट आज, कसको भागमा कति ?
आवाज नेपाल, November 27, 2018
काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युतले जारी गरेको साधारण सेयर (आईपीओ) आज मंगलबार बाँडफाँट हुने भएको छ । कम्पनीको आईपीओ मंगलबार मध्याह्न ३ बजे राजधानीको बिजुलीबजारस्थित एक ब्यांक्वेटमा बाँडफाँट गरिने आयोजनाका प्रवक्ता गणेशप्रसाद न्यौपानेले जानकारी दिए । आयोजनाले यसअघि नै पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित स्थानीयका लागि सेयर जारी गरेको थियो । आयोजनाले सर्वसाधारणका […]
आवाज नेपाल, November 24, 2018
काठमाडौँ । पछिल्ला दिनमा ऊर्जा नदीको रूपमा परिणत भइरहेको खिम्ती खोलामा हाल तीन जलविद्युत् आयोजना निर्माणको क्रममा रहेका छन् । हिमालयन ऊर्जा विकास कम्पनीले १९ मेगावाट क्षमताका दुई आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । यस्तै पिपल्स इनर्जीले ४८. ८ मेगावाट क्षमताको खिम्ती दोस्रो आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । हिमालयन ऊर्जा विकास कम्पनीले ती आयोजना आगामी असारभित्र […]
आवाज नेपाल, November 15, 2018
मेलम्ची । सिन्धुपाल्चोकमा निर्माणाधीन १०२ मेगावाटको मध्यभोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाविरुद्ध स्थानीयवासी आक्रोशित बनेका छन् । आयोजनाविरुद्ध बाह्रबिसे नगरपालिकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिएको छ । कर्मचारी सञ्चयकोषका कर्मचारी, संस्थापक शेयरधनी संस्था र ऋणदाता संस्थाका कर्मचारीका लागि शेयर खुला गरेकै दिन नगरपालिकाले आयोजनाविरुद्ध उजुरी दिएको हो । आयोजना शुरु गर्दा प्रभावित क्षेत्रमा विभिन्न सहयोग गर्ने लिखित प्रतिबद्धता […]